लकडाउन हटेपछि सडक दुर्घटना बढ्ला ! « News of Nepal
एक त नेपालमा सवारी दुर्घटना बढी नै हुने गरेको छ । त्यसमाथि अब लकडाउन खुलेपछि सार्वजनिक सवारीसाधनको तँछाडमछाड नै हुन्छ । त्यो समयमा यात्रुको चाप र सवारीसाधनको प्रतिस्पर्धाले सवारी दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न । अहिलेदेखि नै सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्छ । कतै चालकको लापरबाही त कतै साँघुरा सडक, दुर्घटनाको कारण जेसुकै भए पनि जसले आफन्त, नातागोता, इष्टमित्र, छोराछोरी, श्रीमान्, श्रीमती गुमाएको छ । त्यसको पीडा जीवनभरि नै उनीहरुको मनमा परिरहेको हुन्छ ।
नेपालमा हुने अधिकांश सडक दुर्घटनामा कम उमेरमा सवारीचालक अनुमतिपत्र पाएका ट्यापे, झ्यापे र अत्यधिक मादक पदार्थ अनि लागूऔषध सेवन गरेर अनियन्त्रित ढंगले सवारी चलाउने युवा चालकहरुले गर्दा नै दुर्घटना दिनानुदिन बढ्दो क्रममा छ । मारे पनि के भो त ? भोलिपल्ट व्यवसायी आउँछन्, सेटिङ मिलाइहाल्छन् अनि पैसा पनि इन्सुरेन्स कम्पनीले तिर्ने हो, पुलिसलाई हल्का पैसा दिएपछि मुचुल्का नै बदलिन्छ । अनि, भोलि फेरि त्यो ड्राइभर निस्केर बाहिर गई अर्को परिवारको दियो ननिभाउला भनेर कसरी मान्ने ?
नेपालमा सवारी दुर्घटना बढ्नुको प्रमुख कारण यही नै हो भने सहायक कारणहरु थोत्रा र चलाउँदा पूरै वातावरणलाई कालो बादलले ढाक्ने गरी धूवाँ आउने सवारीसाधनहरु, दशकौँदेखि स्तरोन्नति हुन नसकेका मिनी तालयुक्त खाल्डाखुल्डी भएका जर्जर सडक, सडकछेउमा बनाएका अव्यवस्थित भौतिक संरचनाहरु आदि हुन् । दुर्घटना आफैँमा दुःखद घटना हो ।
पीडित परिवार आफैँ पीडामा हुन्छ र ठूलो वज्रपात सहिरहेको हुन्छ । अपत्यारिलो घटनाले ठूला उथलपुथल ल्याएको हुन्छ । यस्तो संवेदनशील घडीमा प्रशासन आफैँ सक्रिय भएर पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनुको सट्टामा आफैँ व्यवसायीसँग मिलेर पैसाको चलखेलमा मुद्दालाई निरीह बनाइदिन्छन् ।
आखिर कहिलेसम्म यो सिलसिला दोहोरिने ? के पीडित परिवारप्रति राज्यको कुनै दायित्व हुँदैन ? हे सरकार । यदि तिमीमा अलिकति पनि मानवीयता छ भने यस्तो कानुन लिएर आऊ जहाँ दुर्घटना गराउने चालकहरुले पनि सजाय पाऊन्, ताकि भविष्यमा फेरि अर्को दुर्घटना नहोस् ।
पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको पनि व्यवस्था होस् । सडक चौडा एवं गति मापन मेसिन लगाएर दुर्घटना न्यूनीकरणतर्फ लागियोस् । होइन भने, लकडाउन खुलेपछि दुर्घटनाले अझै विकराल र भयावह अवस्था ल्याउने निश्चित छ ।
– राकेश महर्जन, काठमाडौं ।